အလုပ်ထွက်စာကို မည်ကဲ့သို့ရေးရမည်နည်း - Myanmar Network
Posted by Soe Soe Win on April 27, 2015 at 11:51 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
အလုပ်ထွက်စာသည် မိမိလုပ်ငန်းပြောင်းလဲရန်အတွက် အလုပ်ထွက်ရာတွင် မရေးမဖြစ်ရေးသားရမည့် စာဖြစ်ပြီး အခြေအနေနှင့် အချိန်အခါကိုလိုက်၍ သင့်တော်သည့်ပုံစံကိုရေးသားရန် အရေးကြီးပါသည်။
အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည့် အလုပ်ထွက်စာနမူနာများကို လေ့လာပြီး သင့်အတွက် အကိုက်ညီဆုံးစာကို ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ် ပြီးနောက် သင့်တော်အောင်ပြင်ဆင်ကာ လိုအပ်ပါက အဆင်သင့်သုံးစွဲနိုင်ပါသည်။
အလုပ်ထွက်စာ နမူနာ (သာမန်ရေးဖွဲ့ခြင်း)
အလုပ်ထွက်သည့်အခါတိုင်းတွင် သင်သည် သင့်အလုပ်ရှင်ကို အလုပ်ထွက်စာ တင်ကို တင်ပေးရပါမယ်။ မျက်နှာချင်းဆိုင် ဆွေးနွေးပြောဆိုပြီးရင်တောင်မှ တင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီလိုပြုလုပ်ဖို့အတွက် အရိုးရှင်းဆုံးနည်းလမ်းကတော့ ထွက်တော့မယ်ဆိုတာဖော်ပြပါ၊ နေ့ရက်ကို ဖော်ပြပါ၊ ပြီးနောက် ၎င်းတို့ရဲ့ ကုမ္ပဏီမှ လုပ်ပိုင်ခွင့်ရခဲ့တဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်လိုက်ပါ။
Dear [INSERT MANAGER’S NAME], (သို့ [မန်နေဂျာ၏ အမည်])
Please accept this letter as notice of my resignation from the position of [INSERT JOB TITLE] at [INSERT COMPANY].
ဤစာကို [ကုမ္ပဏီနာမည်] မှ ကျွန်တော်၏ [ရာထူးအမည်] မှ နှုတ်ထွက်ကြောင်း အသိပေးစာအဖြစ် လက်ခံစေလိုပါသည်။
As per the terms of my employment contract, I will continue to work for the company for the next [INSERT NOTICE PERIOD LENGTH], completing my employment on [INSERT LAST DAY YOU INTEND TO WORK].
အလုပ်လုပ်ရာတွင် ချုပ်ဆိုခဲ့သည့် စာချုပ်အရ ကျွန်တော်သည် ကုမ္ပဏီမှ နှုတ်ထွက်မည့် [သင်အလုပ်လုပ်လိုသည့် နောက်ဆုံးနေ့စွဲ] မရောက်မီ နောက်ထပ် [အချိန်အပိုင်းအခြား တစ်ခု] ဆက်လက်လုပ်ကိုင်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
I have enjoyed beingapart of the team and am thankful for the opportunities you have given me during my time here. If there are any areas in particular you would like me to focus on during my notice period, please let me know.
ဝန်ထမ်းတစ်ဦးအဖြစ် ပါဝင်ခွင့်ရခဲ့သည့်အတွက် အလွန်ကျေနပ်ခဲ့ရပါသည်။ အလုပ်လုပ်နေစဉ်ကာလအတွင်း ပေးခဲ့သည့် အခွင့်အရေးများအတွက် ကျေးဇူးအထူးပင်တင်ရှိပါသည်။ အလုပ်မှထွက်မည့်နေ့မတိုင်ခင် ကာလအတွင်း လုပ်ငန်း၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုခုကို အလေးပေးပြုလုပ်ခိုင်းလိုပါ သိရှိခွင့်ပေးပါ။
I hope that I can rely on you forapositive reference in future.
(အနာဂါတ်တွင် သင့်ထံမှ ကောင်းသော ထောက်ခံချက် ရမည်ဟု မျှော်လင့်ပါသည်။)
[INSERT NAME] [သင့်နာမည်ထည့်ပါ]
အလုပ်ထွက်စာ (ရုံးသုံးစာရေးနည်းဟန်ဖြင့် အတည်အခန့်ရေးခြင်း
(အလုပ်ထွက်ရာတွင် သင်၏အလုပ်ရှင်ကို မည်သည့်ဖြေရှင်းချက်မှမပေးလို့ (သို့) ကျေးဇူးတင်ကြောင်းမပြောလိုပါက သင်၏ အလုပ်ထွက်စာတွင် အခြေခံကျသော အချက်များကိုသာ ဖော်ပြထားနိုင်သည်။ တိုတိုနှင့် လိုရင်းပေါ့)
ဤစာကို [ကုမ္ပဏီနာမည်] မှ ကျွန်တော်၏ [ရာထူးအမည်] မှ နှုတ်ထွက်ကြောင်း အသိပေးစားအဖြစ် လက်ခံစေလိုပါသည်။
အလုပ်ထွက်စာ နမူနာ ပုံစံ (အသေးစိတ်ရေးဖွဲ့ခြင်း)
အလုပ်လုပ်ရာတွင် အလုပ်ရှင်နှင့် ကောင်းမွန်သော အတွေ့အကြုံများရရှိခဲ့ပါက မည်သည့်ကိစ္စအတွက်ကြောင့် အလုပ်ထွက်ရသည်ဆိုသည့် အကြောင်းရင်းကို အနည်းငယ်ပိုမို၍ ရှင်းပြပေးသင့်သည်။ အကြောင်းပြချက်တစ်ခုကို စွဲမြဲစွာ ဆုပ်ကိုင်ထားပါ။ သူတို့ကို သင်သည် သင့်အလုပ်အကိုင်လမ်းကြောင်းအတွက် ကောင်းမွန်သော ပြောင်းရွှေ့မှုကို ပြုလုပ်ခြင်း နှင့် ၎င်းတို့နှင့် ကောင်းမွန်သော ဆက်ဆံရေးအခြေအနေကို ဆက်လက်ထားရှိနေမည်ကို အသိပေးပါ။
Although this has beenadifficult decision to make, I have been offered an opportunity that I believe will help me reach my long-term career goals. I hope you will understand my reasons for moving on.
ကျွန်တော်၏ ရေရှည်အနာဂတ်မှတ်တိုင်ကို ရောက်ရှိနိုင်မည်ဟု ယုံကြည်ရလောက်သည့် အခွင့်အရေးများဖြင့် (အခြားတစ်နေရာတွင်) ကမ်းလှမ်းခံရသောကြောင့် ခက်ခဲသည့်ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ချလိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အလုပ်မှ ထွက်ရသည့်အကြောင်းရင်းကို နားလည်နိုင်မည်ဟု မျှော်လင့်ပါသည်။
As per the terms of my employment contract, I will continue to work for the company for the next [INSERT NOTICE PERIOD LENGTH], completing my employment on [INSERT LAST DAY YOU INTEND TO WORK]. If there are any areas in particular you would like me to focus on during my notice period, please let me know.
အလုပ်လုပ်ရာတွင် ချုပ်ဆိုခဲ့သည့် စာချုပ်အရ ကျွန်တော်သည် ကုမ္ပဏီမှ နှုတ်ထွက်မည့် [သင်အလုပ်လုပ်လိုသည့် နောက်ဆုံးနေ့စွဲ] မရောက်မီ နောက်ထပ် [အချိန်အပိုင်းအခြား တစ်ခု] ဆက်လက်လုပ်ကိုင်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။ အလုပ်မှထွက်မည့်နေ့မတိုင်ခင် ကာလအတွင်း လုပ်ငန်း၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုခုကို အလေးပေးပြုလုပ်ခိုင်းလိုပါ သိရှိခွင့်ပေးပါ။
I have enjoyed beingapart of the team and am thankful for the opportunities you have given me during my time here. I oweagreat deal to the company and wish you all the best in future endeavors..
အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးအဖြစ် ပါဝင်ခွင့်ရခဲ့သည့်အတွက် လွန်စွာမှကျေနပ်မိပါသည်။ အလုပ်လုပ်နေစဉ်ကာလအတွင်း ပေးခဲ့သည့် အခွင့်အရေးများ အတွက် ကျေးဇူးအထူးပင်တင်ရှိပါသည်။ ကုမ္ပဏီအပေါ်တွင် ကျေးဇူးကြွေးများ တင်ရှိနေပြီး သင်တို့အားလုံးနောင်အနာဂါတ်တွင် လုပ်ကိုင်သမျှ အောင်မြင်ပါစေလို့တောင်းဆုပြုပါသည်။
ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ သာမန်အလုပ်ထွက်ခြင်းအတွက် လုံလောက်တဲ့ ရည်းညွှန်းစာများ ရရှိသွားပြီလို့ ထင်ပါတယ်။ အင်တာနက်ပေါ်မှာ အခြားနမူနာအလုပ်ထွက်စာတွေလည်း အများကြီးရှိပါတယ်။ Google မှာ ရှာပြီး ဆက်လက်လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
Career-advice.monster.co.uk မှ Resignation Letter Samples ကို ကိုးကားဘာသာပြန်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် ရေးသားထားသော မူရင်းဆောင်းပါးကို ဤနေရာတွင် ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။
[Myanmar Network အသင်းဝင်ထားခြင်းဖြင့် ရရှိမည့် အကျိုးကျေးဇူးများ ]
အလုပျထှကျစာသညျ မိမိလုပျငနျးပွောငျးလဲရနျအတှကျ အလုပျထှကျရာတှငျ မရေးမဖွဈရေးသားရမညျ့ စာဖွဈပွီး အခွအေနနှေငျ့ အခြိနျအခါကိုလိုကျ၍ သငျ့တျောသညျ့ပုံစံကိုရေးသားရနျ အရေးကွီးပါသညျ။
အောကျတှငျဖျောပွထားသညျ့ အလုပျထှကျစာနမူနာမြားကို လလေ့ာပွီး သငျ့အတှကျ အကိုကျညီဆုံးစာကို ရှေးခယျြဆုံးဖွတျ ပွီးနောကျ သငျ့တျောအောငျပွငျဆငျကာ လိုအပျပါက အဆငျသငျ့သုံးစှဲနိုငျပါသညျ။
အလုပျထှကျစာ နမူနာ (သာမနျရေးဖှဲ့ခွငျး)
အလုပျထှကျသညျ့အခါတိုငျးတှငျ သငျသညျ သငျ့အလုပျရှငျကို အလုပျထှကျစာ တငျကို တငျပေးရပါမယျ။ မကျြနှာခငျြးဆိုငျ ဆှေးနှေးပွောဆိုပွီးရငျတောငျမှ တငျပေးရမှာဖွဈပါတယျ။ အဲ့ဒီလိုပွုလုပျဖို့အတှကျ အရိုးရှငျးဆုံးနညျးလမျးကတော့ ထှကျတော့မယျဆိုတာဖျောပွပါ၊ နရေ့ကျကို ဖျောပွပါ၊ ပွီးနောကျ ၎င်းငျးတို့ရဲ့ ကုမ်ပဏီမှ လုပျပိုငျခှငျ့ရခဲ့တဲ့အတှကျ ကြေးဇူးတငျလိုကျပါ။
Dear [INSERT MANAGER’S NAME], (သို့ [မနျနဂြော၏ အမညျ])
ဤစာကို [ကုမ်ပဏီနာမညျ] မှ ကြှနျတျော၏ [ရာထူးအမညျ] မှ နှုတျထှကျကွောငျး အသိပေးစာအဖွဈ လကျခံစလေိုပါသညျ။
အလုပျလုပျရာတှငျ ခြုပျဆိုခဲ့သညျ့ စာခြုပျအရ ကြှနျတျောသညျ ကုမ်ပဏီမှ နှုတျထှကျမညျ့ [သငျအလုပျလုပျလိုသညျ့ နောကျဆုံးနစှေဲ့] မရောကျမီ နောကျထပျ [အခြိနျအပိုငျးအခွား တဈခု] ဆကျလကျလုပျကိုငျပေးမညျဖွဈပါသညျ။
ဝနျထမျးတဈဦးအဖွဈ ပါဝငျခှငျ့ရခဲ့သညျ့အတှကျ အလှနျကနြေပျခဲ့ရပါသညျ။ အလုပျလုပျနစေဉျကာလအတှငျး ပေးခဲ့သညျ့ အခှငျ့အရေးမြားအတှကျ ကြေးဇူးအထူးပငျတငျရှိပါသညျ။ အလုပျမှထှကျမညျ့နမေ့တိုငျခငျ ကာလအတှငျး လုပျငနျး၏ အစိတျအပိုငျးတဈခုခုကို အလေးပေးပွုလုပျခိုငျးလိုပါ သိရှိခှငျ့ပေးပါ။
(အနာဂါတျတှငျ သငျ့ထံမှ ကောငျးသော ထောကျခံခကျြ ရမညျဟု မြှျောလငျ့ပါသညျ။)
[INSERT NAME] [သငျ့နာမညျထညျ့ပါ]
အလုပျထှကျစာ (ရုံးသုံးစာရေးနညျးဟနျဖွငျ့ အတညျအခနျ့ရေးခွငျး
(အလုပျထှကျရာတှငျ သငျ၏အလုပျရှငျကို မညျသညျ့ဖွရှေငျးခကျြမှမပေးလို့ (သို့) ကြေးဇူးတငျကွောငျးမပွောလိုပါက သငျ၏ အလုပျထှကျစာတှငျ အခွခေံကသြော အခကျြမြားကိုသာ ဖျောပွထားနိုငျသညျ။ တိုတိုနှငျ့ လိုရငျးပေါ့)
ဤစာကို [ကုမ်ပဏီနာမညျ] မှ ကြှနျတျော၏ [ရာထူးအမညျ] မှ နှုတျထှကျကွောငျး အသိပေးစားအဖွဈ လကျခံစလေိုပါသညျ။
အလုပျထှကျစာ နမူနာ ပုံစံ (အသေးစိတျရေးဖှဲ့ခွငျး)
အလုပျလုပျရာတှငျ အလုပျရှငျနှငျ့ ကောငျးမှနျသော အတှအေ့ကွုံမြားရရှိခဲ့ပါက မညျသညျ့ကိစ်စအတှကျကွောငျ့ အလုပျထှကျရသညျဆိုသညျ့ အကွောငျးရငျးကို အနညျးငယျပိုမို၍ ရှငျးပွပေးသငျ့သညျ။ အကွောငျးပွခကျြတဈခုကို စှဲမွဲစှာ ဆုပျကိုငျထားပါ။ သူတို့ကို သငျသညျ သငျ့အလုပျအကိုငျလမျးကွောငျးအတှကျ ကောငျးမှနျသော ပွောငျးရှမှေု့ကို ပွုလုပျခွငျး နှငျ့ ၎င်းငျးတို့နှငျ့ ကောငျးမှနျသော ဆကျဆံရေးအခွအေနကေို ဆကျလကျထားရှိနမေညျကို အသိပေးပါ။
ကြှနျတျော၏ ရရှေညျအနာဂတျမှတျတိုငျကို ရောကျရှိနိုငျမညျဟု ယုံကွညျရလောကျသညျ့ အခှငျ့အရေးမြားဖွငျ့ (အခွားတဈနရောတှငျ) ကမျးလှမျးခံရသောကွောငျ့ ခကျခဲသညျ့ဆုံးဖွတျခကျြကို ခလြိုကျရခွငျးဖွဈပါသညျ။ အလုပျမှ ထှကျရသညျ့အကွောငျးရငျးကို နားလညျနိုငျမညျဟု မြှျောလငျ့ပါသညျ။
အလုပျလုပျရာတှငျ ခြုပျဆိုခဲ့သညျ့ စာခြုပျအရ ကြှနျတျောသညျ ကုမ်ပဏီမှ နှုတျထှကျမညျ့ [သငျအလုပျလုပျလိုသညျ့ နောကျဆုံးနစှေဲ့] မရောကျမီ နောကျထပျ [အခြိနျအပိုငျးအခွား တဈခု] ဆကျလကျလုပျကိုငျပေးမညျဖွဈပါသညျ။ အလုပျမှထှကျမညျ့နမေ့တိုငျခငျ ကာလအတှငျး လုပျငနျး၏ အစိတျအပိုငျးတဈခုခုကို အလေးပေးပွုလုပျခိုငျးလိုပါ သိရှိခှငျ့ပေးပါ။
အဖှဲ့ဝငျတဈဦးအဖွဈ ပါဝငျခှငျ့ရခဲ့သညျ့အတှကျ လှနျစှာမှကနြေပျမိပါသညျ။ အလုပျလုပျနစေဉျကာလအတှငျး ပေးခဲ့သညျ့ အခှငျ့အရေးမြား အတှကျ ကြေးဇူးအထူးပငျတငျရှိပါသညျ။ ကုမ်ပဏီအပျေါတှငျ ကြေးဇူးကွှေးမြား တငျရှိနပွေီး သငျတို့အားလုံးနောငျအနာဂါတျတှငျ လုပျကိုငျသမြှ အောငျမွငျပါစလေို့တောငျးဆုပွုပါသညျ။
ဒီလောကျဆိုရငျတော့ သာမနျအလုပျထှကျခွငျးအတှကျ လုံလောကျတဲ့ ရညျးညှနျးစာမြား ရရှိသှားပွီလို့ ထငျပါတယျ။ အငျတာနကျပျေါမှာ အခွားနမူနာအလုပျထှကျစာတှလေညျး အမြားကွီးရှိပါတယျ။ Google မှာ ရှာပွီး ဆကျလကျလလေ့ာနိုငျပါတယျ။
Career-advice.monster.co.uk မှ Resignation Letter Samples ကို ကိုးကားဘာသာပွနျထားခွငျးဖွဈပါတယျ။
အင်ျဂလိပျဘာသာဖွငျ့ ရေးသားထားသော မူရငျးဆောငျးပါးကို ဤနရောတှငျ ဖတျရှုနိုငျပါတယျ။
Permalink Reply by Zaw Ye on June 4, 2015 at 11:00
Permalink Reply by Richard Michael William on June 29, 2015 at 7:57
Permalink Reply by Nwe Nwe Khaing on August 6, 2015 at 12:34
Permalink Reply by Lynn Naingoo on September 26, 2015 at 1:37
Permalink Reply by Kyaw Zin Oo on May 16, 2016 at 8:27
Let me share others .
Permalink Reply by Kyi Pyar on August 17, 2017 at 13:18
copy ကူးပြီးသိမ်းထားချင်လို့ ကော်ပီကူးလို့မရဘူး။ ဘယ်လိုကူးရမလဲ သိချင်လို့ပါ။
Permalink Reply by aungnaingthu on October 31, 2017 at 10:53